ECuba, Akukho mali yeGringos | - Ezintsha
Eyona Ezintsha ECuba, Akukho mali yeGringos
ECuba, Akukho mali yeGringos
IYunivesithi yaseHavana, eVedado.UBrady Dale woBukele
apho unokuthenga ioyile ye-cbd yokwenyani
Xa ungenayo imali eninzi eHavana, ubuncinci ipitsa isebenza kuphela malunga ne-10 yepesos yesizwe (malunga ne- $ .50, kwimali yaseMelika). Ayisiyiyo le nto baseMelika bayicinga njenge pizza. Ifana nepancake ngokutshiza itshizi kunye namanzi abomvu abomvu, kodwa iya kukufumana. Kwiipeso ezintathu ngaphezulu, ungongeza iglasi encinci yesiselo seziqhamo. Ngokwesiqhelo, yijusi yegwava, kwaye ilungile ngenene.
Ndafika eCuba ngoDisemba 2, usuku lwesibini lwenkonzo eqhelekileyo yaseDelta ukusuka eNew York City ukuya eHavana. Abasebenzi esangweni lam eJFK batyhafiswa kukuhlela inkqubo entsha. Ndandididekile, ndinexhala lokuba into endiyiphosileyo malunga nezohlwayo zaseCuba zingandithintela ukuba ndingene kwinqwelomoya. Into ebekufanele ukuba bendinexhala ngayo kukufumana iATM.
Yabona, ukuba ubumi bakho baseMelika, ngekhe ufumane imali eCuba. Ndikufundile oku kabuhlungu ngaphezulu kweentsuku ezintlanu phantse ezingenamali apho. I-American Airlines kunye neJetBlue yayizizo okokuqala ngeenqwelomoya ezihleliweyo kwisizwe samaKomanisi, njengoko Ijenali yeWall Street ixelwe. Abantu abaninzi baseMelika baya apho kungekudala kwaye ngokungathandabuzekiyo baninzi baya kwenza impazamo endiyenzileyo. Iindaba ezimnandi: ungadlula. Iindaba ezimbi: Andiqinisekanga ngento onokuyenza ukuba ufumanisa ukuba awukwazi [Hlaziya: Kukho indlela yokwenza, esele siyongeze kwada kwasekupheleni].
Nje ukuba umntu waseMelika abe seCuba, akanakufumana nayiphi na imali engaphezulu kunaleyo anayo ekufikeni kwakhe, ubuncinci ngaphandle kokungqiba, ukuboleka, ukweba okanye iakhawunti yebhanki yelinye ilizwe. Amakhadi etyala aseMelika asebenza kwiindawo ezimbalwa kakhulu. IiATM aziwamkeli amakhadi okutsala eMelika. Ilizwe lisaqhuba ngemali.
Ndibonakalise eCuba ndinemali engaphezulu kwe- $ 100. Kwiziko lotshintshiselwano, yajika yaba malunga ne-90 CUC-eyona ibaluleke ngakumbi kwiimali ezimbini ezisemthethweni zaseCuba. ICuba irhafisa iipesenti ezilishumi kwirhafu. Kungathatha i-50 CUC ukuya kundibeka apho bendihlala khona ndibuyele kwisikhululo seenqwelomoya. Ngamanye amagama, bendinemali elingana ne-9 yeedola ngosuku ukuhlala kwesi siqithi. Ngethamsanqa, igumbi lam besele lihlawulelwe.
Olu yayiluhambo lokuqala lwamazwe aphesheya endandiluthathe ndedwa kwaye lwabonisa. Isikolo saseWushu eChinatown, emazantsi endandihlala kuwo.UBrady Dale woBukele
Emva kokuba ndifike kwisikhululo senqwelomoya iJosé Martí eHavana, bekukho oomatshini ababini beATM kanye ecaleni kotshintshiselwano ngemali. Omnye wayengasebenzi. Ndizamile enye. Kwandichukumisa indlela ekhawulezileyo ngayo i-ATM ukuba ikhadi lam lasebhange alilunganga. Ndizamile amatyeli ambalwa, ukuze ndiqiniseke. Akukho nto. IATM yaseMelika ayikaze ifumanise ukuba andixabisekanga ngokukhawuleza.
Ndibala imali yam encinci ndaza ndalinda ukuyitshintshela kwimali yalapha. Kuthathe ixesha elongezelelekileyo kuba umshicileli weerisithi uqhubekile kwaye umfazi osemva kwekhawuntara akakwazanga ukuzilungisa ngokwakhe, ke kuye kwafuneka silinde umphathi ukuba abuye azokukwenza kathathu. Emgceni, ndabuza esi sibini sisemva kwam ukuba akukho nto siyaziyo malunga neebhanki zaseMelika eCuba. Ngaphambi kokuba baphendule, umfana waseMelika emva kwabo wabaphendula. Yimali entle kakhulu apha, ndoda, kwaye undinike le Uyakrexwa, bhuti jonga.
Ndicinga ukuba inye kuphela ibhanki yaseMelika eCuba, enye ibhanki iphuma eFlorida, umfana ebendimbuze umbuzo ukuba ndimdibanise. I-Bankgate Bank yeyona nto kusebenza kuphela ibhanki yase-US eCuba, kodwa ayidwelisi isebe kwiwebhusayithi yayo. I-Stonegate ayiphendulanga kwisicelo sokuphawula.
Ngelixa ndilinde emgceni, ndibukele omnye umhambi ezama ukusilela ukusebenzisa iATM. Okungakumbi kuye kamva.
UJohn Caulfield, ozakuzo owayethathe umhlala-phantsi nowayekhokele icandelo lezinto ezinomdla eCuba ngaphambi kokuba ashiye inkonzo yamanye amazwe, wacacisela uMqwalaseli ukuba ukusebenzisa amakhadi okuthenga ngetyala aseMelika kwakungavumelekanga kude kube nguDisemba 2014. Ukanti, iibhanki ezininzi zaseMelika azikawaqinisekisi amakhadi abo eCuba, utshilo. Uthe uyabazi abantu abasebenzise amakhadi eStonegate apho. IVisa yenqabile ukunika izimvo ngeli bali. I-Mastercard ayibuyisanga zicelo ezininzi zokubeka izimvo.
ICaulfield ngoku isebenza njengomcebisi kwiinkampani ezinethemba lokuqhuba ishishini kunye neCuba. Ulawulo luka-Obama, utsho, ukholelwa ukuba ulivulile ilizwe kangangoko lingenakho ngaphandle kweCongress ilungisa umqobo wangoku. Ngo-Okthobha, iSebe lezeMali laseMelika lakhupha olu lawulo isikhokelo sokugqibela esihlaziyiweyo , ezijolise ikakhulu kumashishini aseMelika 'okuthengisa iimpahla kunye neenkonzo ngeenjongo zomphakathi. Kodwa akukho nto kwisikhokelo esitsha ebeya kwenza kube lula kum ukuba ndifumane izandla zam kwiidola ezimbalwa ngaphezulu.
Ndirhafisile apho bendihlala khona, iCasa ekhethekileyo endiyifumene kwi-Airbnb. Umbuki zindwendwe wayengumfazi onobubele ogama linguMaria owayengathethi siNgesi. Umntu waseLondon owayevela ePortugal owayesebenzela inkampani yamazwe ngamazwe naye wayehlala apho ubusuku obunye. Umntu endandihlala naye iiyure ezingama-24 wayesazi kakuhle iSpanish nesiNgesi. Ndamchazela ibali lam kuye, wathi ii-ATM zisebenza kakuhle. Ke undikhokelele kwindawo ekufutshane, kodwa khange zisebenzele mna.
Kodwa umfazi kwisikhululo seenqwelomoya wayendixelele ukuba mandizame iNtshona Union. Ke ndiye ndaqala ndahamba ndaya kwisitalato iObispo eHabana Vieja, eyona ndawo izele ngabakhenkethi. Umntu endandihlala naye ithutyana weza nam. Ukufika kwethu kwiNtshona Union, yayivalwa kungekudala, kwaye yayinomgca wabantu abamalunga neshumi ngaphambili. Nantoni na ebaluleke kakhulu okanye yeziko laseCuba kubonakala ngathi linomgca. Ndiye ndayijoyina ke umntu endandihlala naye wahamba eyedwa.
Senze izicwangciso zokudibana kwakhona ngentsimbi yesi-6, siyokuselwa, nangona ukuthengiswa kotywala kwakusaqhubeka kuba isizwe sisazilile ngoFidel Castro.
Ngelixa ndilinde emgceni, ndathumela abazali bam eKansas imiyalezo ebhaliweyo malunga nengxaki endikuyo. Ndibaxelele ukuba bangakhathazeki kodwa kufuneka ndizame ukuqonda ukuba bangandithumela njani imali. Ndandisazi ukuba bazakukhathazeka. Benza njalo. Ubuthongo babuphelile. Ndichithe ixesha elininzi lohambo lwam ndizikhathaza ngendlela oluxhalabise ngayo usapho lwam — indlela yokuchitha ixesha eMidwestern.
Nje ukuba ngaphakathi ngaphakathi kwi-Western Union, ndafunda ukuba iinkonzo zenkampani zifumaneka kuphela kubantu baseCuba. Inkampani inephepha malunga nokuthumela imali apho kwiwebhusayithi yayo . Akukho ngxaki, ndacinga, ndingamamkela umphathi wam ukuba amkele imali yam. Ndingathanda ukumonwabela ndenze njalo. Ke babhale phantsi lonke ulwazi endikudingayo lokufumana kuye bandinika.
Ndadibana nomntu endandihlala naye emva kweeyure ezimbalwa. Ndamxelela ukuba andinakufumana enye imali ngokutshintshiselana ngemali. Uye wathi, ndizakuboleka imali phambi kokuba ndihambe. Akukho ngxaki. Ndathi loo nto inganceda kakhulu.
Imali sisihloko esingathandekiyo kum. Andikaze ndikuthande ukuthetha ngayo. Andikuthandi ukuya kwiqela lesidlo sangokuhlwa sabantu ngoba uhlala uphela kufuneka uthethe ngokwahlula-hlula itsheki. Xa ndandihlala nabanye abantu, ndandingathandi ukujongana namatyala.
Xa ndamxelela malunga nombono wabazali bam ukuthumela imali kuMaria, umphathi wam, wathi, Oo, ayizukuba yingxaki. Ndizakuyichaza kuMaria.
Ingxaki yayikukuba: Ndabona iingxaki ezininzi. Kwafuneka ndibathumelele imeyile abazali bam kwimiyalelo yaseKansas. Kuthekani ukuba ifowuni yam ayinakunxibelelana? Abazali bam kwafuneka babazi kakuhle. Ukuba kuvela ingxaki, bafuna ukuyisombulula kwaye bangandithumeli nge-imeyile kwakhona ukuyisombulula. Ndiza kucela abantu eMidwest ukuba bancede ekulungiseleleni ukuthumela imali kwilizwe lamaKomanisi phantsi kwemiqathango yorhwebo. Kuninzi okungahambi kakuhle. Kuthekani ukuba abantu baseNtshona Union khange bandinike ulwazi oluchanekileyo?
Ngobo busuku, ndabala i-25 CUC yokuhamba kwam ngeteksi ndibuye ngoLwesithathu. Ndayisonga loo nto kunye ne-visa yam yokubuya, ipaspoti yam kunye nepasipoti yam yokukhwela (esebenza njengobungqina bomshuwalense wezempilo). La yayingamaxwebhu abalulekileyo ebomini bam. Ndazibuza ukuba kwenzeka njani ukuba umntu abe nesibindi sokuhamba kwiinkonzo zefowuni zelizwekazi.
Ngaba ezi yingxaki zokuqala endakha ndazifumana ezazingezizo #iNgxakiOkuQala zeHlabathi? Libala ndibuze. Kwipaki ye-Wi-Fi apho ndenze khona iinzame zam zokudibanisa.UBrady Dale woBukele
Ngentsasa elandelayo, umbuki zindwendwe wam wenza isidlo sakusasa esaneleyo iziqhamo ezine ezitsha, imiqolo yesonka, amaqanda amabini kunye neham kunye netshizi. Ubeka nje yonke imihla. Kubonakala ngathi ibandakanyiwe. MnaNdonwabile ukuba suku ngalunye kuya kubakho isidlo esinye esifanelekileyo.
Umntu endandihlala naye ndaye ndagqiba kwelokuba sichithe usuku kunye de abhabhe. Kuqala, saya eParque Fe del Valle, indawo ekufuphi ekufikeleleni kwindawo yokufikelela yeWi-Fi emiselwe ngurhulumente, i-Etecsa. Unokuhlala uzibona ezi ndawo kuba kuya kuhlala kukho abantu abaninzi abagobileyo ngezixhobo zabo kwaye amadoda aya kusondela kuwe ngokuphindaphindiweyo akubuze, iWi-Fi? Bathengisa amakhadi enza ukuba abantu bakwazi ukungena kwi-Intanethi. Ndihlawule i-3 CUC kwelinye ibhinqa eliselula ukufumana ikhadi lokungena kwaye, emva kokuba isibini sizamile, I-Blackberry Priv yam ungene kwi-Intanethi.
Sele ndinayo i-imeyile kubazali bam. Ndiyithumele.
Sahamba saya kwisikhululo sebhasi kufutshane neCapitolio kwaye sachitha i-5 CUC kutyelelo olwandle iiyure ezimbalwa. Ndifikile apho, ndachitha i-1 CUC kumanzi amakhulu asebhotileni. Yayenye yeentsuku zam ezibalaseleyo.
Ebhasini, umntu endandihlala naye kwakhona waphinda wathi uzakundiboleka imali ngovuyo. Ndaphinda ndathi oko kuya kuba kuhle. Nkqu ne-20 yeedola ibinokuba luncedo olukhulu.
Ndimbuzile ngezidlo zangokuhlwa. Ngaba yayiqukiwe? Uthe wayecinga njalo, kodwa ukuba yayingeyiyo yayiya kuba yiCUC embalwa kuphela ngosuku. Ingxaki kukuba bendingenayo iCUC embalwa. Le nyani khange ibonakale ifikelela nakumntu endihlala naye.
Xa sabuyela edolophini, ndema epakini kwakhona ukujonga i-imeyile yam. Abazali bam babebhalele bathi isebe le-Western Union kwivenkile ebebelityelele kwidolophu yasekhaya lithe lonke ulwazi endiluthumeleyo alunamsebenzi. Babefuna umhla wokuzalwa kwendwendwe lam. Ndicela nindicebise, umama ubhale.Njengoko usapho lwam lwaluza kuchaza emva kokuba ndibuyise i-stateside, kwacaca ukuba ivenkile ayenziwanga lushishino lwe-Western Union, ngakumbi hayi eCuba. Isithethi se-Western Union kamva sandixelela ukuba, enyanisweni, ngaphezulu kwama-90 epesenti emali ethunyelwa eMelika isiya eCuba ivela eFlorida.
Nokuba ndicebisa nantoni na ngabazali bam okanye akunjalo, kwakungakhathali. Elo iya kuba lixesha lokugqibela ndiphumelela ekunxibelelaneni nabo de ndifike ekhaya. Khange ndikwazi ukuthumela i-imeyile ngempumelelo kwakhona.
Ukubuyela kwam endlwini, umntu endandihlala naye wayesele eza kunduluka. Ndimxelele ukuba abazali bam khange bakwazi ukuthumela imali phofu kwaye bendinexhala lokuba ayizukusebenza. Undixelele ukuba konke kuzolunga kwayeishiye ingandibolekanga nto. Andizisanga nayo, kuba, njengoko benditshilo, ndinobunzima ekuthetheni ngemali. Endaweni yoko, wabuza umhlobo wosapho lukaMaria (owayethetha iSpanish kuphela), ukuba andixelele iindawo endinokuphuma kuzo xa ixesha lokuzila likaFidel liphelile. Ndiye ndamjonga ebethetha amazwi angenangqondo kum.Uhambile kwaye ithemba lokugqibela ebendinalo lokufumana izandla zam imali encinci lihambe naye.
Uninzi lwabantu baseMelika abakule meko eCuba bafumana uncedo kubakhenkethi abangoogxa babo, kamva uCaulfield wachaza. Oku kuya kubandakanya ukwamkela ingxaki yam kubantu abangabaziyo, kwaye andenzelwanga ngezinto ezinzima.
Ngobo busuku, ndangqengqa ebhedini ndaza ndabala i-29.70 CUC (ingabalwa imali yeteksi) endandiyishiyile. Ndabala kwakhona iintsuku ezine endizishiyileyo: NgeCawa, ngoMvulo, ngoLwesibini nangoLwesithathu okanye ngo-7.42 ngosuku. Oku kubonakala kubi kakhulu, nangona kwakwanele ukuba ndifuna kuphela ibhotile enye enkulu kunye nee-pizza ezimbini zesonka ngosuku, kodwa kuthekani ukuba kukho into evelileyo? Izinto zaziqala ukubonakala zimbi.UBrady Dale woBukele
U-dick gregory usaphila
NgeCawa, ndahamba ngeHabana Vieja. Ngaphandle kwe IMyuziyam yoQhushululu, apho ndimise khona umzuzu ukuze ndiphumle, ndadibana nomfazi waseMelika. Sathetha ngohambo lwam, kwaye wabuza ukuba kutheni ndihlala eHavana kuphela. Ndixokile. Wandibuza iinkcukacha apho ndihlala khona, kwaye ngandlela thile kwacaca ukuba isidlo sakusasa sasimahla esinegumbi yayingeyonto iqhelekileyo eCuba, kwaphela.
Ukubuya kwam endlwini ngobo busuku, ndabuza umbuki zindwendwe, ngendoda yakhe, ukuba ndibize okanye hayi. Uthe ixabisa i-4 CUC. Ndityumke. UMaria, owayeqonda ukuba ndinengxaki nemali kuhambo, wathi akukho ngxaki. Umyeni wakhe, kuyabonakala ukuba, wayengaqondi. Wayebanda kum ixesha lam lonke apho. Oku kunokuba nje yintloko yam. Ndibathembise bobabini ukuba ndizakufumana indlela yokubabhatalela isidlo sakusasa xa ndibuyile.
Ukusukela ukubuya kwam ndambhatala imali endandimtyala yona kunye nezinye, nge Western Union. Andikwazi ukuyenza kwi-intanethi, kuba inkampani ivumela kuphela ukuthunyelwa kweentsapho kwiwebhusayithi yayo, kodwa ndakwazi ukugqiba ukuthunyelwa okungekho kwintsapho kwiDuane Reade kwiSithili seMali. Yinyani: Ndidinga umhla wokuzalwa kaMaria. Ngelo xesha, ndandinayo.
Ngobo busuku ndandibaleka amanani ezinto ndandisele nazo. Ngokwenza njalo, ndingayenza into enkulu. Khange ndifune ukuba nomba ngolwe-Lwesithathu. Yonke into endiza kuyenza ngoLwesithathu yayikukuya kwisikhululo seenqwelomoya. Ke nyani ndinokubala nje ngoMvulo nangoLwesibini. Ubugcisa besitrato iapropos eHavana.UBrady Dale woBukele
Ndifumene ixabiso elifanelekileyo kwezo bhotile zinkulu zamanzi kwaye ndathenga ezininzi ngaloo mini, ndishiya i-22.25 CUC. Oku kuthetha ukuba bendine-11 CUC ngosuku. Andizange ndizive ndisityebi ngolu hlobo. Ndingakuthethelela ukuya kwimyuziyam enye ngomhla wokugqibela.
Ngenxa yobungqina bam obutsha, ndibuyele epakini ukuya kwenza ingxelo. Ndithethile nabantu baseCuba malunga nendlela abayisebenzisa ngayo i-intanethi. Ndathetha nabantu baseMelika malunga nokuza eCuba. Ngapha koko, ndadibana nomfana epakini owayekule meko ndikuyo. Wayene-saver encinci encinci phantsi komlomo wakhe ongezantsi kwaye akazange amnike igama lakhe, nangona wayendixelele ukuba uza kuvela eNew KwiYork. Ngapha koko, ndicinga ukuba ibinguye lo bendimbonile ukuba uzama kwaye asilele ukufumana imali kwiATM kwisikhululo senqwelomoya ngolwe-Sihlanu.
Luhlobo nje lwebali elihlekisayo, wandixelela. Uhambo lwakhe lwaluhamba naye eCuba kude kube nge-19. Ndiyathemba ukuba usaphila kodwa ukuba mhlawumbi iintsuku zakhe zenkathazo zimkhokelele ekubeni athathele ingqalelo ukukhetha kwakhe kwizinwele zobuso. Emva koko ezinye izinto ezilungileyo zinokuvela kwilishwa lethu esabelana ngalo.
Ndadibana nabenzi beefilimu abancinci ngobo busuku. Esi sibini sasifunda eSwitzerland, kwaye babesenza ifilimu malunga nepaki yeWi-Fi. Sijonge amapolisa aqhekeza isangqa sokudanisa ebesimile ngaphambi kokuba umculo uphinde ugunyaziswe emva kwesililo sikaCastro kuzwelonke. Sizamile ukuyiqonda into eyenzekileyo, emva koko bandibuza ukuba ndiyafuna na ukudibana nabo ndisele ubusuku obulandelayo, xa bekusemthethweni kwakhona.
Ewe, bendicinga, ndinganakho ukuchitha imali eyi-3 CUC ekuseleni.
Mhlawumbi, bendicinga ukuba ndingabacela ukuba bandiboleke imali? Wayengenomdla wokunceda.UBrady Dale woBukele
Ndichithe uMvulo ndihamba ndisiya ngasentshona, ndigqitha eVedado. Ndahamba ngeMalecon kwaye ndabona abantu besela okokuqala kwiintsuku ezilithoba ngaselwandle. Emini, xa ndandihamba, ndandingakhathazeki kakhulu. Kwakungekho kubi kangako ukuhamba nje ujonge, ndithetha nabani na ondinqandileyo, nokuba ndiyazi ukuba yayikukuphithizela okuncinci. Ndafumana izitulo emthunzini ndaza ndazoba endikubonileyo. Ndithathe imifanekiso emininzi. Kwakungekho kubi kangako.
Khange ndicele abahlobo bam abaselayo ngemboleko xa sidibene. Yintoni eyayibalulekile ngelo xesha? Ndifumene indawo apho iibhiya ngokuqinisekileyo zibiza ngaphantsi kwe-1 CUC inye, kodwa zandikhokelela kwindawo entle apho umfazi waphakama waqala ukucula iinguqulelo zaseSpain zemigangatho yeJazz. Ndigqibele kutshiza i-5 CUC ngobo busuku. Ukuqengqeleka okuphezulu.
Kubekho amaxesha kuhambo xa bendicinga ngokuthengisa ezinye zezixhobo zam ze-elektroniki ukuze ndifumane imali. Kwafika kum kamva ukuba ndinenye into kunye nam endinokuyithengisa: i-bitcoin. Ngo-2015, uFernando Villar wagqitywa intengiselwano yokuqala ebhaliweyo eCuba, isebenzisa iWi-Fi yayo yoluntu. Ndidibene noMike Dupree we-Easybit, opharetha i-bitcoin ATM otyelele eCuba amatyeli aliqela. Akazange akwazi ukuthengisa ngempumelelo i-bitcoin ngemali kulo naluphi na undwendwelo lwakhe, nokuba sele eposile amaxabiso otshintshiselwano anomtsalane.
Ukuze usebenzise i-bitcoin ngokulula, kufuneka unxibelelwano kwi-intanethi, uDupree wabhala nge-imeyile. Esi inokuba sesinye sezithintelo ezinkulu ekusetyenzisweni ngokubanzi kwe-bitcoin eCuba.
Kwi-imeyile kuMbonisi, uVillar, uvulindlela, wongeze inqaku lakhe lokuba nethemba, ndisenethemba lokuba izinto zizakutshintsha kwakamsinya kodwa ngenxa yokunqongophala kwe-intanethi, ulwazi nge-cryptocurrency kunye nolawulo oluqinileyo lukarhulumente ayizukwenzeka ixesha elithile.
Zange ndathengisa nanye yezinto zam kuba ndingazi ukuba ndingayenza phi. Ukunyaniseka, konke endikuphosileyo kukutya okungcono kancinci kwaye mhlawumbi enye okanye ezimbini zolondolozo lwembali. Xa ndingakhange ndixinaniswe kukuxhalaba malunga nongxamiseko, yile nto ndazixelela yona: Ndinesidlo sendawo yokutyela eliwaka endingasasikhumbuliyo, kodwa imeko yam yemali yenza ukuba oluhambo lungalibaleki.
Ngomhla wam wokugqibela, ndaya kwiZiko loLondolozo lweMbali lobuGcisa laseHavana, indawo eyayinikezelwe kubazobi baseCuba. Ndithathe ixesha lam, ndikrola imisebenzi yam endiyithandayo kunye nokulibaziseka. Ukubuyela kwam endlwini, ndichithe ubusuku bonke ndifunda, ndishiya okwethutyana ipitsa yam edanisayo yesonka samasi kunye neiglasi zokugqibela zejusi yeziqhamo. Andikwazanga kulinda ekhaya. Ndise kude.UBrady Dale woBukele
Ukufika kwekhabhathi kwisikhululo seenqwelomoya ngentsasa elandelayo, kundise kwisikhululo esingalunganga. Babengazi ukuba aphi amasango eDelta kwaye nam bengenjalo. Njengoko kwenzekayo, isibini esivela eTexas sasilapho, naso saye salahleka. Umsebenzi ucebise ukuba sithathe iteksi siye kwisiphelo esisekunene, kuba ikwiikhilomitha ezimbini ukusuka kwaye kushushu kakhulu. Ndicelile uba ndingabelana nabo nge cab ndavuma.
Ukufika kwethu kwisiphelo esichanekileyo, i-cabbie yathi iyakuba yi-10 CUC. Oku kubonakala ngathi kugqithisile ngenxa yokukhwela kwe-25 CUC ukusuka eHavana, kodwa yintoni esinokuyenza? IiTeans ziyibhatalile. Ndibanike i-3 CUC. Andiqondi ukuba yayisisabelo sam esilungileyo sokukhwela, kodwa yayiyimali yokugqibela endandinayo. Umsindo wokugqibela ngaphambi kokuba ndimke.
Nje ukuba ndibuyele kumazwe, umntu endandihlala naye iiyure ezingama-24 wandithumelela umyalezo kuWhatsApp osuka eLondon ukubuza ukuba ingaba ndigqibe na ukonwabela ukuhlala kwam.
Ndingathi, ndibhale, yayingamava axabisekileyo.
QAPHELA: Okoko uthumele eli bali, uMqwalaseli ufundile ukuba amaMelika anokuba nawo abafowunelwa ekhaya bathumela imali ngeNtshona Union ukukhathalela uMzi woZakuzo wase-US eCuba. Nge-14 kaDisemba ngo-2016 4: 16 PM.
Ngaba uSteve Harvey nguTyler Perry omtsha (weOfisi yeBhokisi)?
'Ibali laseHorry laseMelika: Roanoke' Phinda ubuye kwakhona 6 × 06: URyan Murphy (Evan) uPeter Out
Ukubhomboloza enzonzobileni: Impumelelo engenakwenzeka yeNirvana ‘Nevermind’
ukuhanjiswa kokutya njengefaskoti eluhlaza
ungayifumana njani i-narcissist ukuba ikuhloniphe
ujonga njani amanani simahla
dontzfeldt Ihlabathi langomso
cbd yezinja kufutshane nam